‘बाबुरामले धर्म छाडे’ :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
‘बाबुरामले धर्म छाडे’ भट्टराई भन्छन्- कांग्रेसले गुन लगाएको होइन, लेनदेन भएको हो
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, जेठ ५
पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको चर्चा फेरि चलेको छ।
वैशाख अन्तिम साता भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता भयो। सात प्रदेशसहितको संविधान जारी भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र छोडेका भट्टराईले एकता सभामा भने- नेपालमा १० प्लस १ प्रदेश हुनुपर्छ। सात प्रदेशले भर्खर काम थालेको बेला फेरि नयाँ प्रस्ताव ल्याएको भनेर कतिपय उनको आलोचना गरे।
डेढ वर्षअघि एक सिटमात्र भएको र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाएको नयाँशक्ति र फोरमको एकतासँगै भट्टराई १७ सांसद भएको पार्टीका अध्यक्ष बनेका छन्। उनका पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री भएकाले उनी अहिले सत्तापक्षीय सांसद हुन्।
गत बिहीबार पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबारे दिएको अभिव्यक्ति पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल र उनको गृहजिल्ला गोरखामा चर्चाको विषय बनेको छ।
पोखराको कार्यक्रममा भट्टराईले भने- अब कांग्रेसको युग सिद्धियो। उसले निजी स्वतन्त्रता, उदारवादमा आधारित लोकतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेकै हो। उसलाई धन्यवाद दिऔं। र सम्मानका साथ म्युजियममा राखौं।’
बहुदलीय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी दललाई लक्षित गर्दै नेताले भाषण गर्नु नौलो होइन। भट्टराईका सन्दर्भमा भने यो नौलो किन भयो भने कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव जित्दा उनले पाँच वर्ष कांग्रेससँग राजनीतिको ‘धर्म’ निर्वाह गर्ने वाचा गरेका थिए।
कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट गोरखा-२ मा भट्टराईले वामगठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सात हजार मतान्तरले हराए। विजय यात्रामा भट्टराईले भने- एउटा राजनीतिक नैतिकता के हुन्छ भने यो संसदको अवधिसम्म (पाँच वर्ष) हामीले सहकार्य गरेर जानुपर्छ। संयुक्त रूपमा (कांग्रेस र नयाँ शक्ति) विजय भएर गएपछि महत्वपूर्ण विषयमा हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ, यो राजनीतिक धर्म हो।’
आफूले नै मत हालेर जिताएका भट्टराईले अहिले आफ्नै पार्टीलाई संग्राहलयमा राख्ने भन्दा कांग्रेसको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय नेताहरूले पनि ‘अचम्मित’ छन्।
कांग्रेस गोरखाका सभापति हरिबहादुर घलेले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै बाबुरामले आफूलाई मत दिने कांग्रेस कार्यकर्ता र आमजनताको गुन भुलेको बताए।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले म्युजियममा को जाने समयले निर्णय गर्ने बताएका छन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्- काग र कोइलीको फरक वसन्त ऋतु आएपछि थाहा हुन्छ डाक्टर सा’व। म्युजियममा कांग्रेस जाने की माओका अनुयायी बाबुराम!, समयले निर्णय गर्नेछ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरूङले भट्टराईलाई पार्टी फेर्दै हिँड्ने नेताको रूपमा लिएका छन्। उनले पनि ट्वीट गर्दै भनेका छन्- ‘एकजना पार्टी फेर्दै हिड्ने श्रद्धेय नेताले नेपाली कांग्रेसलाई म्युजियममा राख्नुपर्छ भनेका रहेछन्। तर पार्टी फेर्दै हिड्ने नेता यस्ता हुन्छन् भनेर प्रदर्शन गर्न चिडियाखानामा राख्नुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्न किनकी राजनीतिमा विचारको बहस चलाउनु पर्छ, न की गालीगलौजको।’
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले कांग्रेसबाट धेरै कुरा सिक्नु पर्ने अर्थमा उसलाई म्युजियममा राखेर सम्मान गर्नुपर्छ भनेको बताए। भट्टराईले भने, ‘कांग्रेसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेको हो। म्युजियममा राख्ने भनेको त इतिहासबाट सिक्नका लागि भनेको हो। उदारवादी लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि कांग्रेसले जुन योगदान गर्‍यो त्यो योगदान उसको प्रशंसनीय छ। त्यसबाट सिक्नुपर्छ।’
गोरखातिर भट्टराईले धर्म छाडेर कांग्रेसलाई गाली गरे भन्छन् नि! भन्ने प्रश्नमा भट्टराई एकछिन हाँसे।
‘हत्तेरिका! त्यसरी गुन भुल्यो भनेर बुझ्न भएन। हामी अलग अलग पार्टी हो नि! कांग्रेसका साथीहरूले बुझ्नुपर्‍यो। नयाँ शक्तिले समर्थन नगरेको भए उहाँहरूले पनि रसुवामा कहाँ एक्लै जित्नुहुन्थ्यो त। राजनीतिमा त लेनदेन गर्ने हो नि कांग्रेस साथीहरुले बुझ्नुपर्‍यो।’
उनले कांग्रेस अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढ्न नसक्ने भएकोले विकल्प खोज्नु पर्ने पनि बताए।
‘कांग्रेस नयाँ ढंगले अघि बढ्न सकिराखेको छैन। विकल्प दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘नयाँ शक्तिले पनि सित्तैमा दिँदैन कांग्रेसले पनि सित्तैमा दिँदैन। विचार मिलेर सहकार्य गरिएको थियो, दोहोरो लाभ भयो। त्यो हेर्नुपर्‍यो। रसुवा र गोरखामा समझदारी भएको हो त्यहाँ जितियो। पहाडमा कांग्रेसले शेरबहादुरजीले जितेको हो अन्त कहाँ जितेको छन्? रसुवामा कांग्रेसले र गोरखामा मैले जितेको होइन? यो यथार्थ हो साथीहरूले बिर्सनुभएन।’
उनले आगामी दिनमा पनि कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने बताए।
‘आगामी दिनमा पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा टेकेरै समाजवादमा जाने हो। लोकतन्त्रको मुद्दामा कांग्रेस र हामी एकै ठाउँमा छौं,’ उनले भने, ‘कम्युनिष्टको एकदलीय अधिनायकत्व अब चल्दै चल्दैन। केही समयका लागि मात्रै हो। त्यही भएर कुहिएको फर्सी भनेको हो। फर्सी कुहिएको अहिले थाहा हुँदैन भित्रभित्रै कुहिएको हुन्छ। बाहिर सद्दे देखिएको फर्सीभित्र कुहिएको हुन्छ नेकपा पनि त्यस्ते भित्रभित्र कुहिँदै गएको छ।’
कांग्रेस गठबन्धन गर्नुअघि गत चुनावमा भने भट्टराई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा मिसिन तम्तयार भएका थिए।
दश वर्ष जनयुद्ध लड्दै शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेलेका भट्टराई २०७२ असोज ९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर लागे। त्यसपछि भट्टराईको राजनीति उखाडबखाडयुक्त छ। उनले माओवादी पार्टी छाड्दा पनि ‘भत्किन लागेको र रातो स्टिकर टाँसेको घर’ भनेका थिए।
उनले तत्कालीन एमाओवादीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको र नेता सत्ताकेन्द्रीत भएकाले त्यो पार्टी जतिबेला पनि ढल्न सक्ने भएकाले रातो स्टिकर टाँसेको घरमा बस्नुभन्दा बरू झुपडी बस्नु उपयुक्त हुने तर्क गरेका थिए।
त्यतिबेला नयाँ संविधानले मधेशी, जनजाति, थारूलगायतलाई अधिकार दिन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर भट्टराई स्थानीय तह निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धनसँगै पार्टी एकता गर्ने छलफलमा जुटेका थिए।
आफैंले रातो स्टीकर टाँसेको घरको संज्ञा दिएको माओवादी र एमालेले चुनावी गठबन्धन गर्ने भएपछि भट्टराई पनि त्यो छलफलमा भाग मात्रै लिएनन्, एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव उठ्न राजी भए।
तर गोरखा-२ मा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई छाड्नु पर्ने भएपछि उनी भोलिपल्टै गठबन्धनबाट बाहिरिए र कांग्रेससँग चुनावी तालमेलमा लागे।
प्रकाशित मिति: आईतबार, जेठ ५, २०७६, १४:२५:००